ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ဂျေ Tkach ကနေန်ထမ်းပေးစာ > MB 2018 နိုဝင်ဘာလ
သခင်ယေရှု၏ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်သူကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ကြွလာသည်ကိုသင်စဉ်းစားဖူးပါသလား။ သူသည်တန်ခိုးနှင့်ဘုန်းတော်ကိုပြသရန်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်အတူမလာခဲ့ပေလော။ သူသည်စကားပြောသောတိရစ္ဆာန်တစ် ဦး အနေနှင့်သို့မဟုတ် Marvel ရုပ်ပြများမှစူပါဟီးရိုးတစ် ဦး ကဲ့သို့မလာနိုင်ပါသလော။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်းယေရှုသည်အကူအညီမဲ့သောကလေးငယ်အဖြစ်နှိမ့်ချစွာချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ သူ့အစီအစဉ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့နည်းနဲ့သတ်ပစ်ဖို့ပဲ။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုသူမလိုအပ်ပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားကိုတွေးမိတဲ့အခါကျွန်မမအားတက်နိုင်ဘဲအားရမိပါတယ်။ သူ့ကိုပေးဆပ်စရာဘာမှမရှိ၊
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမလိုအပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိမေးခွန်းပေါ်ပေါက်လာသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာအရကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ဖိုးအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖွဲ့စည်းထားသောဓာတုပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုးသည်ပြင်သစ် ၁၄၀ ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရိုးတွင်းခြင်ဆီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ DNA နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိအင်္ဂါများကိုရောင်းလျှင်၎င်းစျေးနှုန်းသည်ဆွစ်ဖရန့်သန်းသန်းအထိမြင့်တက်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤစျေးနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောတန်ဖိုးနှင့်မနီးစပ်ပါ။ ယေရှု၌အသစ်သောသတ္တဝါများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ ယေရှုသည်ဤတန်ဖိုး၏ရင်းမြစ် - ဘုရားသခင်နှင့်ရင်းနှီးသောအသက်တာ၏တန်ဖိုးကိုရရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကိုကျွန်ုပ်တို့အားဘာမျှမတောင်းဆိုခဲ့ပါ၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်သူသည်စုံလင်သော၊ သန့်ရှင်းသော၊ ဤဆက်နွယ်မှုသည်ဘုရားသခင်ပေးသောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့လွတ်လပ်စွာနှင့်ပျော်ရွှင်စွာရရှိသောစည်းလုံးမှုနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၌ရှိနှင့်သမျှအရာအားလုံးကိုသူ့အားအပ်နှင်းခဲ့သည်။
ခရစ်ယာန်တွေးခေါ်သူများသည်ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်သောဂုဏ်အသရေကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ သြဂတ်စတင်းက“ မင်းတို့ကိုမင်းတို့ကိုမင်းကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။ နင့်အနားယူသည်တိုင်အောင်ငါတို့စိတ်နှလုံးသည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်နှင့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Blaise Pascal က“ လူသားတိုင်း၏နှလုံးသားထဲတွင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သာဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်အချည်းနှီးရှိသည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ CS Lewis က“ ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌ ၀ မ်းမြောက်ခြင်းခံစားခဲ့ရသူတစ်ယောက်မှကမ္ဘာပေါ်ရှိပျော်ရွှင်မှုအားလုံးအတွက်မျှဝေချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ” သူသည်ကျွန်ုပ်တို့လူသားများကိုဘုရားသခင်အား“ တောင့်တခြင်း” ၌ဖြစ်စေသည်ဟုဆိုသည်။
Gott schuf alles (einschliesslich uns Menschen), weil «Gott die Liebe ist», wie es der Apostel Johannes ausdrückte (1. ဂျိုဟန် 4,8). Gottes Liebe ist die höchste Realität – die Grundlage aller geschaffenen Realität. Seine Liebe ist von unendlich grossem Wert und es ist seine erlösende und verwandelnde Liebe, die er uns entgegenbringt und die unseren wahren Wert aus- macht.
လူသားများကိုဘုရားသခင်ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းအမှန်တကယ်ဘယ်တော့မျှမျက်ခြည်မပြတ်ပါစေနှင့်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေနာကျင်မှုခံစားရသည့်အခါဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်၍ သူ၏အစီအစဉ်အတိုင်းနာကျင်မှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သတိရသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ၀ မ်းနည်းခြင်းများကြုံတွေ့ရသောအခါဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်၍ တစ်နေ့တွင်မျက်ရည်ရှိသမျှကိုသုတ်တော်မူမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သတိရသင့်သည်။